Madaxa & Daaweynta Kansarka San Diego - California Proton
Kansarrada Madaxa & Qoorta
Daaweynta Proton ee Daaweynta Kansarka Madaxa & Luqunta
La dagaallama Kansarka Madaxa & Qoorta oo leh Sax-u-eg Laser
Farsamaynta iskaanka teknoolojiyadda sawir-qaadka qulqulka qallafsan ee California Protons waa qaab aad u sax ah oo lagu daweeyo shucaaca kansarka kaasoo u saamaxaya dhakhaatiirteena inay si aad ah u bartaan bartilmaameedka burooyinka laga helo maskaxda iyo gobolka qoorta xasaasiga ah ee feejignaanta sare leh.
Tiknoolajiyadda iskaanka qalin-qoriga ee loo yaqaan 'Pencil beam scanning' ayaa lagu daaweeyaa burooyinka madaxa iyo qoorta iyadoo la siinayo shucaaca proton-ka saxda ah 2-milimitir. Waxay ku weerartaa daaha burooyinka lakab, ayagoo ku duubaya qaababka burooyinka culus si loo yareeyo tirada shucaaca ee la siiyo unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha. Tani waxay muhiim ku tahay madaxa iyo qoorta, maadaama burooyinkaani badanaa u baahan yihiin shucaac aad u sareeya isla markaana ay kudhagan yihiin qaabdhismeedka muhiimka ah, sida maskaxda, maskaxda dareemayaasha, qanjirka tayroodhka, qanjirrada hunguriga, hunguriga, sanduuqa codka, laf-dhabarka iyo laf-dhabarka.
Daaweynta Proton ee Madaxa & Luqunta
Faahfaahinta Daaweynta Kansarka
Kansarrada madaxa iyo qoorta ee soo noqnoqda (horay loo daaweeyay)
Saldhigga kansarka qalfoofka
Kansarka 'Larynx' (sanduuqa codka)
Kansarka afka iyo afka
Kansarka qanjirka 'Salivary gland'
Kansarka sanbabada (nasopharyngeal)
Yaree qaddarka qaab-dhismeedka caadiga ah sida maskaxda, maskaxda dareemayaasha, qanjirka tayroodh, qanjidhada candhuufta, hunguriga, sanduuqa codka, laf-dhabarka, iyo laf-dhabarka1
Faafida unugyadan caadiga ah waxay u horseedi kartaa waxyeelo yar-yar waqti-gaaban, waqti dhakhso u soo kabasho, iyo yareynta halista u baahan tuubada quudinta2
Maqaarka caadiga ah ee ay ku duusho protons-ka ayaa yareyn kara halista dhaawaca daanka3
Xaaladaha qaarkood, protonsku waxay horumariyaan xakameynta cudurka iyo badbaadada4, 5, 6
Hoos u dhig khatarta kansarka sare ee shucaaca7
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Madaxa & Qoorta
Tiknoolajiyadayada baarista beenta qalinku waxay si sax ah u xakameysaa tamarta birta iyo, marka la eego, meesha ugu badan ee shucaaca la gaarsiinayo ee loo yaqaan Bragg peak. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan daaweyno qaababka burooyinka ee aadka u adag oo aan ku kala duwanaano qiyaasta gudaha burooyinka madaxa iyo qoorta.
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u xulasho shucaac sare u qaadaan burooyinka kansarka, iyo yareynta qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Sababtoo ah daaweynta madax iyo qoorta proton waxay si fiican u xaddidi kartaa shucaaca meel ka baxsan bartilmaameedka, dhakhaatiirtu waxay awood u yeelan karaan inay u yareeyaan shucaaca unugyada caafimaadka qaba ee mas'uulka ka ah aragga, maqalka, dhadhanka, awoodda hadalka, cunidda iyo liqidda iyo shaqada maskaxda.
Daaweynta Proton ee Kala Duwan
Noocyada Kansarka Madaxa & Qoorta
Burooyinka madaxa iyo qoorta ayaa ku yaal dhismayaasha muhiimka ah; Koritaanka buro aan lala socon waxay noqon kartaa mid ba'an. Iyada oo ku xidhan marxaladda madaxa, qoorta, hunguriga, afka ama kansarka carrurta, daaweynta isku dhafan ee qalliinka, kemotherabi iyo shucaac ayaa loo baahan karaa burooyinka qaarkood. Xulashooyinka daaweyntu sidoo kale waxay saameeyaan nooca iyo heerka kansarka, caafimaadka guud ee bukaanka iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Kansarrada afka ayaa caadi ahaan ka bilaabma dabaqyada, unugyada dhuuban ee isku xidha bushimahaaga iyo gudaha afkaaga, oo ay ku jiraan dhabannadaada, saqafkaaga iyo dabaqa afkaaga. Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy therapy' ee kansarka afka ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto qiyaasta shucaaca ee unugyada caadiga ah ee aan la beegsanin marka la daaweynayo burooyinka afka.
Kansarka dhuunta ayaa ka kooban burooyinka kansarka ee ku dhaca hungurigaaga ama qunfacaha. Tirada bukaanka la kulma culeys daran ama u baahan tuubada quudinta ayaa hoos udhacey 50% bukaannadii helayay daaweynta proton. Saddex bilood ka dib daaweynta, bukaannada kansarka cunaha ee proton therapy ayaa sidoo kale laga soo sheegay inay aad u yareeyaan afka qalalan.2
Noocan ah kansarka afku wuxuu ku samaysmaa salka ama afka carrabkiisa wuxuuna caadi ahaan ku dhacaa unugyada khafiifka ah, ee dusha sare. Burooyinkaani sida caadiga ah waxay u baahan yihiin qaadasho badan oo shucaac ah. Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' ee kansarka carrabka ayaa kaa caawin kara kahortaga waxyeelada bushimahaaga, qanjirada candhuufta, daanka, daloolada qanjirka tayroodh iyo xuubka laf-dhabarka. Xaaladaha qaarkood, waxay sidoo kale yareyn kartaa halista aad u leedahay inaad yeelato awood daciif ah oo dhadhamin, wax liqaysa, wax cuna oo la hadasha.
Kansarka sanka wuxuu caadi ahaan ka bilaabmaa unugyada isweydaarsiga kuwaas oo safka qoyaan, sagxadaha dusha sanka iyo godadka sanka. Daaweynta 'Proton therapy' waxaa laga yaabaa inay si fiican u bartilmaameedsato burooyinka gudaha xaddidan adag ee madaxaaga iyo qaab sankaaga ah maxaa yeelay indhaha, afka, maskaxda iyo dareemeyaasha muhiimka ah iyo xididdada dhiigga ayaa badanaa ku yaal meel u dhow burada. Saxnimada shucaaca weyn ayaa waliba yareyn karta halista aad dareemayaasha daciifka ah, sida awooda urka, dhadhanka, liqida iyo hadalka. Xaaladaha qaarkood, daaweynta proton waxay hagaajisay xakameynta cudurka iyo badbaadada bukaanka qaba burooyinka sanka ee sanka.4, 5, 6
Madaxa & Kansarka Kansarka
Daweynta aagagga aan horay loo arag waxay noqon karaan wax dhib badan, gaar ahaan madaxa iyo qoorta. Wareega labaad ee daaweynta shucaaca-raajada ayaa noqon kara mid aad u qatar ah maadaama unugyada caafimaadka qaba ee ku dhaca burooyinka soo noqnoqda aysan “ilaawin” qiyaasta hore ee shucaaca. Nasiib darrose, qiyaas kasta oo dheeraad ah waxay kordhin kartaa halista dhaawaca unugyada ee caadiga ah. Daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy', goobtaan, waxay awood u siineysaa dhakhaatiirta inay sifiican uga fiirsadaan qiyaasta bartilmaameedka oo ay ku xaddidaan meel kale, taas oo u oggolaan karta dib-ugu-daaweynta shucaaca bukaanka la xushay.
Natiijooyinka Daaweynta Madaxa & Qoorta
& Saamaynta Mudada-dheer
Daaweynta Proton therapy ee kansarka madaxa iyo qoorta ee California Proton Cancer Therapy Center ee San Diego waxay yareyn kartaa halista iyo / ama darnaanta waxyeelada muddada-dheer sida dhaawaca aragga, maqalka iyo dhadhanka. Shucaaca Proton sidoo kale wuu yareyn karaa halista kansarka labaad, maaddaama ay jiraan shucaac yar oo loo gudbiyo unugyada caadiga ah ee caafimaadka qaba. Si kastaba ha noqotee, dhammaan daaweynta kansarka madaxa iyo qoorta ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro, taas oo ku kala duwan iyada oo ku saleysan xaaladaha gaarka ah ee bukaanka. Haddii lagaa helay kansarka madaxa ama qoorta, hubi inaad kala hadasho dhammaan halista suurtagalka ah, iyo sidoo kale xulashooyinka daaweynta, dhakhtarkaaga kansarka.
Daaweynta 'Proton therapy' waxay ahayd mid wax ka beddela ciyaarta. ' Maalin kama gudboonayo uma maleynayo inaan nasiib u helnay inaan ku noolaano lix mayl oo aan ka fogeynno mid ka mid ah xarumaha ugu wanaagsan adduunka. Shaqaalaha oo dhami waa yaab. Naxariis, aqoon iyo daba gal ayaa ahaa mid cajiib ah.
Aabaha Kasey Harvey
Bukaanka Rhabdomyosarcoma Bukaanka
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageeraya Daaweynta Proton ee Kansarka Madaxa & Qoorta
1 Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'proton beam therapy' waxay ka dhalataa sunta si aad ah hoos loogu dhigay marka la barbar dhigo daaweynta shucaaca xoogga leh ee isbeddelada burooyinka madaxa iyo qoorta ee u baahan shucaaca ipsilateral.
2 Intens beam therapy proton beam therapy (IMPT) iyo ku sii xoojinta qaab-daweynta photon therapy (IMRT) ee loogu talagalay bukaanka qaba kansarka oropharynx - Kiis ku habboon iswaafajinta.
3 Cudurka 'proton therapy moduped therapy' iyo osteoradionecrosis ee kansarryngeal kansarka
4 Daaweynta qaybta walwalka leh iyo dawada loo yaqaan 'photon therapy' ee sanbabada paranasal iyo sanka daalka sanka iyo cudurada halista: dib u eegis nidaamsan iyo falanqayn kooban
5 Natiijooyinka Kansarka Sinonasal ee Lagu Daaweeyey Daaweynta Proton
6 Natiijooyinka Muddada-Dheeraadka Ah Ka Dib Daweynta Proton Beam The Funonasal Squamous Cell Carcinoma
7 Dhacdooyinka khaladaadka labaad ee ka dhex dhaca bukaannada lagu daweeyo shucaaca proton ka hor iyo shucaaca photon
Cudurka shucaaca ee 'proton-moduised therapy' ee kansarka loo yaqaan 'nasopharyngeal carcinoma': hoos udhaca qaddarka shucaaca ee qaabdhismeedka caadiga ah iyo dhiirigalinta natiijooyinka caafimaad.
Sumowga degdegga ah ee shucaaca madaxa iyo qoorta ee kansarka sanbabada nasopharynx iyo kansarka sanbabada paranasal: isbarbar dhigga isku dhafka ah ee daaweynta 'proton' protonal protonal protonal proton therapy protonal proton therapy protonal therapy radiation moduised
Qaababka Daaweynta Kala Duwan ee Noocyada Kala Duwan Oo Loogu Jiro Oo Ay Kujirto Daawaynta Proton ee Bukaan-socodka Epithelial ee Orbit iyo Ocular Adnexa
Kordhinta Multifield xoojinta xoogga daaweynta daaweynta proton-ka ee burooyinka madaxa iyo qoorta: tarjumaad lagu tababaro.
Khatarta burada labaad ee la filayo iyo qiyaasta qaab dhismeedka dareemayaasha maskaxda ka dib proton iyo ka hortagga shucaaca ee loo yaqaan 'photon radiotherapy' ee loogu talagalay benign meningioma
Inttonity Modulated Proton Therapy (IMPT) waxay yareysaa baahida loo qabo tuubooyinka quudinta boqolkiiba 50 Boqolkiiba Bukaanka Madaxa iyo Bukaannada Kansarka Neck
Adenoid cystic carcinoma ee marinka sambabka: natiijooyinka daaweynta.
Horumarinta ku-daweynta shucaaca ee kansarka madaxa iyo qoorta
Qiimaynta halista kansarka ee ay keento shucaaca labaad ee daaweynta proton iyo IMRT ee xubnaha kujira qaybta shucaaca koowaad.
Madaxa gunta iyo madaxa qoorta iyo kansarka unugyada squamous leh duulaanka marinnada
Daaweynta shucaaca-isku-ekaanta badan, protons, iyo halista kansarka labaad.
Awoodda isbadal la'aanta ee ku daaweynta shucaaca: photons iyo protons ee ku dhaca sanbabada paranasal
Hagaajinta suurtagalka ah ee qorshaha daaweynta saddexda cabbir iyo daaweynta proton ee natiijada kansarka sanbabada 'maxillary'
Daaweynta shucaaca iftiinka ee loo yaqaan 'proton beam therapy' ee madaxa iyo qoorta
Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'proton beam therapy' ee qalfoofta adenoid cystic carcinoma
Daaweynta shucaaca ee Proton ee kansarka madaxa iyo qoorta
Daawada shucaaca ee loo yaqaan 'proton radiotherapy' ee loogu talagalay parameningeal rhabdomyosarcoma: natiijooyinka caafimaad iyo waxyeelada dambe
Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiation therapy' ee loo yaqaan 'sphenoid sinus malignancies': natiijada ka soo baxda iyo qodobo saadaalin kara
Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' ee kansarka madaxa iyo qoorta: caqli-gal, tilmaamo suurtagal ah, tixgelin la taaban karo, iyo caddeyn caafimaad oo hadda jirta
SOT-scanam beam proton therapy vs xooga-daweynta shucaaca shucaaca ee madax-xanuunka qoorta madaxa iyo qoorta: isbarbardhiga qorsheynta daaweynta.
Faa'iidada suurtagalka ah ee ku daaweynta shucaaca leh protons ee ku dhaca kansarka madaxa iyo qoorta iyadoo laxiriirta taranka jirka ee caadiga ah: dib u eegis nidaamsan ee suugaanta
Isbarbar dhigga qorshaynta daaweynta ee caadiga ah, isku-filnaanshaha 3D, iyo photon-modulated Photon (IMRT) iyo daaweynta proton ee paranasal sinus carcinoma
Natiijada muuqaalka ee shucaaca jajabinta jajaban ee ciladaha sareeya ee loo yaqaan 'sinonasal malignancies' oo shaqaaleysiiya photons / protons